बीच सड़कबाट बाघले आमालाई खाएपछि छोरिहरुको आ’क्रोश,स्केटिंग गरेर ल्याएको ट्रकले किन अगाडी पठायो? भिडियो हेर्नुहोस – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बीच सड़कबाट बाघले आमालाई खाएपछि छोरिहरुको आ’क्रोश,स्केटिंग गरेर ल्याएको ट्रकले किन अगाडी पठायो? भिडियो हेर्नुहोस
भोटेकोसीको पानीलाई डाइभर्सन टनेलबाट अर्को बाटो पठाएपछि गत साता स्पिल–वे भत्किएको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो । बाँध निर्माणसम्बन्धी विद्युत् प्राधिकरणका विज्ञहरू भन्छन्, ‘स्पिल–वेको संरचना बनाएको एक वर्ष नपुग्दै भत्किनु गुणस्तरमाथिकै प्रश्न हो । बाँध नै कमजोर भएपछि आयोजनाको हालत के होला ?’ आयोजनाका एक पूर्वसीईओले आयोजनाको गुणस्तर राम्रोसँग जाँच्ने हो भने धेरै समस्या भेटिने बताए । बाँधमा पानी निकासका लागि बनाइएको एक प्रकारको संरचना स्पिल–वे हो । ‘यसमा पानी, ढुंगा र बालुवाको बढी नै प्रेसर पर्छ,’ भोटेकोसी कम्पनीका सीईओ सुभास मिश्रले भने, ‘बेलाबेलामा मर्मत गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।’****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
रेकर्डअनुसार भोटेकोसी कम्पनीका तत्कालीन सीईओ मणिकुमार काफ्ले, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका दोभासे गोविन्द पौडेल र आयोजनाका प्राविधिकबीच भएको रकम लेनदेनसम्बन्धी कुराकानी सुन्न सकिन्छ । दोभासे पौडेलले काफ्लेलाई आफूले भनेअनुसार काम गरेमा दुई करोडसम्म उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छन् । ठेकेदार, परामर्शदाता र काफ्लेले गरेको कुराकानीको रेकर्डमा आफूहरूको योजनामा आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख सुनीलकुमार लामा बाधक भएको विवरण पटक–पटक बताइएको छ । लामालाई कोड भाषामा ‘हेलमेट’ नाम राखिएको छ । लामा सात वर्षदेखि आयोजनामा कार्यरत थिए । हेलमेटको अर्थ काममा बाधा पुर्‍याउने वा छेक्ने अर्थ लगाइएको छ । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
मेरीबास्सैकी चर्चित कलाकार ‘चम्सुरी’को दुवै मिर्गौला ड्यामेज, तुरुन्तै प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने डाक्टरको भनाइ